Mwai Kibaki waa madaxweynaha sadaxaad ee jamhuuriyadda Kenya. Kibaki waxoo mar ahaan jiray madaxweyne ku xigeen taariikhda marka ee u dhaxeesay 1978 ilaa 1988.Kibaki waxoo madaxweynaha sadaxaad ee dalka kenya noqday sanadka marka oo ahaa 2002, hadaneh waxoo mar labaad ku guuleestay 2007.
Kibaki wuxuu dhashay 1931 tuulada Kikuyu, qaybta Othaya ee degmada Nyeri ee Kenya, hadda gobolka Nyeri. Waa wiilka ugu yar ee reer kikuyu ee Kibaki Gĩthĩnji iyo Teresia Wanjikũ. In kastoo la baabtiisay Emilio Stanley oo ay u adeegsanayeen adeegayaashii Talyaaniga ee da'diisa, waxa loo yaqaanay Mwai Kibaki inta uu noolaa noloshiisa guud. 
Taariikhda afka ah ee qoysku waxay ku adkaysatay in waxbarashadiisii ​​hore ay suurtogal ka dhigtay walaalkiis weyn ee weyn, Paul Muruthi, oo ku adkeeyay in Mwai da'yar uu aadi doono dugsiga halkii uu ku qaadan lahaa maalmaha uu daaqa aabihiis iyo xoolaha iyo cunuga adeer iyo nieces walaashiis ka weyn. Kibaki waxa uu noqday arday arday ah. Waxa uu ka qaybgalay Dugsiga Gatuyain Shares labadii sano ee ugu horeysay, halkaas oo uu ku dhamaystiray waxa loogu yeeray "A" iyo "B" (u dhiganta heerka koowaad iyo laba ama koowaad iyo labaad). Kadib wuxuu ku biiray dugsiga Karima ee dugsiga saddexda fasal ee dugsiga hoose. Kadib wuxuu u wareegay Dugsiga Mathari (hadda Dugsiga Sare ee Nyeri) intii u dhaxaysay 1944 iyo 1946 oo ah Heerarka afar ilaa lixaad, halkaas oo, intaa dheer waxbarashadiisa, wuxuu bartaa nijaarada iyo dhismaha sida ardaydu u hagaajin lahaayeen alaabta guriga iyo inay siiyaan qalab lagu ilaalinayo dhismayaasha dugsiga. Wuxuu sidoo kale kor u kacay cunsuriyaddiisa dhammaan ardayda dhigata dugsigaa laga filayey inay sameeyaan, waxayna ku kasbadeen lacag dheeraad ah inta lagu jiro fasaxyada dugsiga iyagoo ka shaqeynaya kormeerayaal basaska ay maamusho ururka Othaya African Bus Union. Ka dib markii iskuulada hoose ee Karima Primary iyo Nyeri ee iskuulada hoose, wuxuu ku biiray Dugsiga Sare ee Mang'u halkaas oo uu wax ka bartay 1947 iyo 1950. Wuxuu ku gudubtay ugu badnaan lix dhibcood ee imtixaanka Heerka O "4" isagoo u gudbay lix maaddo oo leh fasalka 1 Iskuday.
Weeraradii ay geysteen ciidamadii hore ee dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka ee tuuladiisa, Kibaki ayaa loo tixgeliyey in uu noqdo askari sanadkiisii ​​ugu dambeeyay ee Mang'u. Si kastaba ha ahaatee, go'aanka Xoghayaha Guud ee gumeysiga, Walter Coutts, oo joojiyay qorista dadka Kikuyu, Embu iyo Meru ee ciidankooda, ayaa la siiyay damaciisa millatari. Kibaki waxa uu ka mid ahaa Jaamacadda Makerere ee Kampala, Uganda, halkaas oo uu wax ka bartay Dhaqaalaha, Taariikhda iyo Siyaasadda Siyaasadeed, wuxuuna ugu fiicnaaday fasalkiisii ​​1955 isagoo haystay Heerka Aasaasiga ah ee Heerka Sare (BA) ee Dhaqaalaha. Kadib markii uu qalinjabiyay, Kibaki wuxuu ballan u qaaday inuu noqdo Kaaliyaha Shirkadda Shell Shell ee Shirkadda Bariga Afrika, qaybta Ugandha. Isla sannadkaas, wuxuu ku guuleystey deeq waxbarasho isaga oo u oggolaanaya inuu dhigto daraasad jaamacadeed oo ka tirsan Jaamacadda Ingiriiska. Wuxuuna ku soo noqday liistada London School of Economics ee B.Sc. ee maaliyadda dadweynaha, ka qalinjebin leh farqi. Wuxuu ku noqday Makerere 1958 halkaas oo uu ku baray Kalkaaliye Kaaliyaha dhaqaalaha ilaa 1961.  1961-kii, Kibaki waxay guursadeen Lucy Muthoni, gabadhii wasaaradda kaniisadda, oo markaas ahayd macalin dugsi sare.
Xirfadda siyaasadeed ka hor madaxweynenimada
Horraantii 1960-kii, Mwai Kibaki waxa uu ka tagay akadeemiyad ficil ah isagoo shaqada ka furtay Makerere wuxuuna ku soo noqday Kenya si uu u noqdo sarkaal sare oo ka tirsan Midowga Afrika ee Kenya (KANU), codsi ka yimid Jaramogi Oginga Odinga (oo noqday Kenya madaxweyne-ku-xigeenka koowaad). Kibaki ayaa markaa ka caawiyay in uu qoro dastuurka madax-banaanida Kenya.
Bishii 1963-kii, Kibaki waxaa loo doortay xubin ka tirsan Baarlamaanka Donbass Constituentency (oo markii dambe loo yaqaan Bahati oo hadda loo yaqaan Makadara) Nairobi.  Doorashadiisii ​​waxay ahayd bilawga xirfad siyaasadeed oo dheer. 1963-kii Kibaki waxaa loo magacaabey Xog-hayaha Joogtada ah ee Maaliyadda.  Kaaliyaha Kaaliyaha Wasiirka Maaliyadda iyo Guddoomiyaha Guddiga Qorshaynta Dhaqaalaha ee 1963, wuxuu u dallacsiiyay Wasiirka Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha 1966.  Sanadkii 1969, wuxuu noqday wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha halkaas oo uu ka shaqeyn jiray ilaa 1982. 
1974-kii, Kibaki, ayaa wajahaya tartan culus oo uu ku hayo kursigiisa Donbass Constituency-ka ee Jael Mbogo, oo uu si kooban ugala noqday tartiib tartiib tartiib tartiib tartanka doorashadii 1969-kii,  wuxuu xarun siyaasadeed ka soo guuray Nairobi isaga oo gurigiisa deggan, Othaya, halkaas oo markii dambe loo doortay xubin ka tirsan Baarlamaanka. Isla sannadkaas Jariiradda Time Time wuxuu ku qiimeeyay 100-kii qof ee ugu sarreeya dunida oo lahaa karti ay ku hoggaamiso. Waxaa dib loogu doortay xubin ka tirsan Baarlamaanka Othaya doorashooyinkii dambe ee 1979, 1983, 1988, 1992, 1997, 2002 iyo 2007. 
Markii Daniel arap Moi uu ku guuleystay Jomo Kenyatta oo ahaa madaxweynaha Kenya 1978-kii, Kibaki wuxuu kor u qaaday Ku-xigeenka Madaxweynenimada, wuxuuna hayaa dhaqaalihii Maaliyadda illaa Moi uu isbeddelkiisa wasiirkiisa ka beddelay Arrimaha Arrimaha Gudaha 1982-kii. Markii Kibaki uu ahaa wasiirka Maaliyadda Kenya muddada barwaaqada qarniga ah, oo ay ku korodheen badeecadaha, gaar ahaan kafeega, oo leh habdhaqan maaliyadeed oo cajiib ah iyo siyaasado lacagta ah.
Kibaki wuu ka baqay madaxweynihii Moi bishii Maarso 1988, waxaana loo tuuray madaxweyne ku-xigeenna u soo guuray Wasaaradda Caafimaadka.  Waxa uu u muuqday inuu hoos u dhigo hoos u dhigista isaga oo aan ado badan.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Mwai_Kibaki&oldid=182743"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Oktoobar 2018, marka ee eheed 12:31.